औषधि सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण जानकारी – साइन्स इन्फोटेक
नोभेम्बर 30, 2019 नोभेम्बर 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment औषधि
हजुरले ब्लड प्रेशरको औषधि मात्र होइन जुनसुकै औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ र डाक्टर साहाबको राय अनुसार नै खादै हुनुहुन्छ । पछि सोध्न भुलेको हुनाले औषधि खाइरहेको थिए तर त्यो कम्पनीको नपाएर अरू कम्पनीको खादै छु भन्नु भएमा डाक्टरको उत्तर हुनेछ लेखेको कम्पनीको मात्र खानुपर्ने थियो तर मेरो विचारमा यो गलत हो ।
खाइरहेको औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने भएमा डाक्टरको परामर्श विना आफुखुसि चेन्ज गर्नु ठिक होइन तर लेखेको कम्पनिको औषधि नपाएमा सेम फर्मुला र सेम फार्माकोपियाबाट बनेको औषधि सेवन गर्दा खासै फरक पर्दैन । उदाहरणको लागि Alpine-L BP र Mylod-L lP को औषधि सेम भएपनि बनाउने मेथड फरक हुन सक्छ ।
औषधि खरिद गर्दा हमेसा कुन फार्माकोपियाबाट बनेको छ भन्ने जानकारी हुन सकेमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । औषधि कम्पनीले कस्तो तरिकाले बनाएको छ भन्ने कुरामा जबसम्म अदल बदल नगरी खान नदिदासम्म यो कुरा कसैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
अर्को रोचक जानकारी कम्पनीले आफ्नो सामान बिक्रि गर्नका लागि अर्को कम्पनीको खानुहुदैन भन्दै आफ्नो मात्र बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकेमा आवश्यक औषधि खरिद गरेर खान त्यति गार्हो नहुने देखिन्छ । विगत लामो अनुभवबाट हामीले यो तथ्य फेला पारेका थियौँ ।
एउटै कम्पनीको औषधि लामो समय खाएर राम्रो फाइदा नभएको अवस्थामा त्यही औषधि अर्को कम्पनीको दिनासाथ फाइदा भएको फिड व्याकबाट हामीले पाएका थियौँ । आज औषधिमा पनि सेवा भन्दा व्यापारीकरण भएको देखिन थालेको छ ।
डाक्टरले एउटा नै मात्र कम्पनीको औषधि नै खान भनिदिदा विरामीले त्यो औषधि नपाई खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको जनगुनासाहरू धेरै सुन्नमा आएको छ । यस्ता क्रियाकलाप डाक्टरबाट हुनु राम्रो पक्कै होइन बरू सेम फार्माकोपियाको किनेर खानुस भनिदिए राम्रो हुने हाम्रो ठहर छ ।
← स्वास्थ्यको लागि बेथेको साग खानुका फाइदाहरु
सागसब्जीबाट गरिने रोगको उपचार, जानी राखौ →
One thought on “औषधि सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण जानकारी”
Pingback: अनावश्यक बढि औषधि खानाले के हुन्छ ? यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव